Local News – Let Pan Daily
ယနေ့ မှ နောက်သုံးရက်အတွင်း မိုးကြီး လေထန်နိုင်တဲ့ ဒေသများ
Let Pan | May 19, 2022
ယနေ့မှ နောက်၂၄နာရီမှ ၇၂နာရီအတွင်း မိုးကြီးလေထန်နိုင်တဲ့ ဒေသများများ…………..18/05/2022 ပူတာအိုခရိုင် မိုးညှင်းခရိုင် ဗန်မော်ခရိုင် မြစ်ကြီးနားခရိုင် မိုးရွာနိုင်ပါတယ်18/05/2022 နောက်၂၄နာရီမှ ၇၂နာရီအတွင်း ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနှင့် မုတ္တမပင်လယ်ကွေ့တွင် မိုးကြီးလေထန်နိုင်ပါတယ်မေလလက်ကျန်ရက်တွေမှာ မုတ်သုန်လေညှင်း တနိုင်ငံလုံးကို ရောက်ရှိကာ ဆည်ရေသောက်တောင်သူလယ်သမားများ မိုးကောင်းသောက်တောင်သူလယ်သမားများအားလုံး စိုက်ပျိုးရေအလုံအလောက်ရရှိစေပါမယ်ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်မှာ မုတ်သုန်လေအားကောင်းနေပါတယ် ၂၄နာရီအတွင်း တနင်္သာရီတိုင်း မွန်ပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ် ရန်ကုန်တိုင်း ဧရာဝတီတိုင်းဒေသတွေမှာ
နောက် (၂၄) နာရီအတွင်း လေ၊ မိုး၊ လျှပ်စီး မိုးကြိုး ရှယ် ဝုန်းတော့ မယ့် ဒေသများ
Let Pan | May 9, 2022
သုံးခွ တံတား သီလဝါ သံလျှင် ဒလ ဆိပ်ကြီးခနောင်တို ရန်ကုန် 09/05/2022 မနက် လေမိုးလျှပ် စီးမိုးကြိုးမိုး 🌧🌧🌧နောက်၂၄နာရီအတွင်း နွားထိုးကြီး ငါန်းဇွန် မြင်းမူ အုန်းတော ကျော်ဇေယျာ ဆားတောင် လှတော ဝက်လက် ရွှေဘို ရေဦး ခင်ဦး ကာဘိုး တန့်ဆည် ကန်ထူးမ ဇီးကုန်း တကောင်းသပိတ်ကျင်း
(၁၆)နှစ်သား ကောင်လေး ချစ်သူ နဲ့ ချိန်းတွေ့မိတဲ့ အသက်(၄၀) ကျော် အပျိုကြီး ရဲ့ အံ့ဩ ဖွယ်ရာ အဖြစ်
Let Pan | December 6, 2021
တစ်ခါတုန်းက ပဲ အရမ်းများ တဲ့ အပျို ကြီး တယောက်ဟာ သူ့ကို ချစ်ခွင့်ပန်တဲ့ သူတိုင်း အိုက်တင်အရမ်းခံပြီး ငြင်းပယ်ရင်းနဲ့အသက် (၄၀) ကျော်သွားတော့ သူ့ကို ကြိုက်မဲ့သူ မရှိတော့ဘူး။ဒါနဲ့ နောက်ဆုံး ရှားရှား ပါးပါး (၁၆) နှစ်သားကောင်လေး ချစ်သူတယောက် ရ လိုက်တယ်။တိုတိုပြောရရင် ကောင်လေးရဲ့ ချိန်းဆိုမှုနဲ့အတူ ကန်ဘောင်ပေါ်ကို
Let Pan | September 28, 2021
ဦးဆိုရင် ကြောက်နေရသည် …. ဖုန်းဝင်လာလို့ ကောက်ကိုင် လိုက်တာ ဖေ့ဘုတ် ပေါ် မှာ မနေ့ကမှ ချစ်သူဖြစ်သွားတဲ့ ခေးလေးရဲ့ ဖုန်းဖြစ်နေတော့ ကျုပ် ပျော် သွားတယ်။ “ဦး” “ပြော ခလိန်း” “ဦး ပျော်လို့ရပြီ သိလား” ချိန်းတွေ့ တော့မယ် ထင်တယ်လို့ တွေး မိပြီး ကျုပ်
FACEBOOK သုံးနေ တဲ့ မိန်းကလေးများ ဖတ် ရန် (တကယ့် ဖြစ်ရပ် မှန် ဇာတ်လမ်း လေးပါ…)
Let Pan | August 23, 2021
fbသုံးနေ တဲ့မိန်းကလေးများ ဖတ်ရန်ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အနည်းငယ်သာပြောင်း၍ ရေးပါသည် …. ။ တစ်နေ့ ရုပ်ဖြောင့်ဖြောင့် လူလတ်ပိုင်းဓာတ်ပုံ တင်ထားတဲ့ အကောင့်တစ်ခု မက်ဆင်ဂျာကနေ ညီမလေး အစ်ကိုစကားနည်းနည်း ပြောချင်လို့ ရလား “ဆိုပြီးစာဝင်လာတယ်။ အကူအညီတစ်ခုတောင်းချင် လို့ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ လို့ရေးမိလိုက်တာနဲ့ဗွီဒီယိုကော ခေါ်တာခံလိုက်ရတယ်။ ရုပ်ဖြောင့်သလောက် အပြော ကောင်းလွန်းလှတဲ့သူ့ စကားတွေကြားမှာဖုန်းကို ပိတ်မပစ်ရက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
MMA Fighter မဖြစ်ခင်တုန်းက ပျားလုပ်သား လုပ်ခဲ့တဲ့ အောင်လအန်ဆန်း ရဲ့ ဘ၀ဇာတ်ကြောင်း
Let Pan | August 10, 2021
မြန်မာနိုင်ငံက ပရိသတ်တွေ အားပေးမှု ကို အပြည့်အဝ ရထားတဲ့ အပြင် တကမ္ဘာလုံးက ပရိသတ်တွေ အခိုင်အမာရှိတဲ့ MMA Fighter တယောက်ဖြစ်တဲ့ အောင်လအန်ဆန်ကိုတော့ တော်တော်များများလည်း သတိထားမိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ အောင်လအန်ဆန်ကတော့ ယခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ သူထိုးခဲ့တဲ့ ပွဲတိုင်းကို အနိုင်ယူထားပြီး သူ့ရဲ့ Champion ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ကို ကာကွယ်ထားနိုင်တဲ့ Fighter
ဖမ်းဆီး ခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပရိတ်သတ်ကြားချင်နေတဲ့ သတင်းကောင်းလေးကို ပြောပြလာတဲ့ ရှေ့နေများ
Let Pan | August 5, 2021
မဂ်လာပါ ချစ် ပရိတ်သတ်ကြီးရေအနုပညာရှင်တချို့ မကြာခင်ထပ်မံ လွတ်မြောက်ဖို့ရှိတဲ့ အကြောင်းယုံကြည်ရတဲ့ ရှေ့နေအသိုင်းအဝိုင်းပြောအမှု့ရင်ဆိုင်ဆဲ အချုပ်ကျခံနေရတဲ့ အနုပညာရှင်အချို့မကြာခင်အချိန်အတွင်း ထပ်မံလွတ်မြောက်ဖို့ ကြားနေရတယ်လို့လက်ရှိ ၅၀၅ က နဲ့အမှုရင်ဆိုင်နေရ သူတွေကို လိုက်ပါကူညီပေးနေတဲ့ယုံကြည်ရတဲ့ရှေ့နေ အသိုင်းအဝိုင်းက သိရပါတယ်။လတ်တေလာမှာ အနုပညာရှင်တွေ ခံဝန်ကတိတွေနဲ့ လက်မှတ်ထိုးငွေပေးပြီးပြန်ထွက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကအနုပညာ လောကမှာတကယ်ဖြစ်နေတာမျိုးမရှိဘူးလို့အနုပညာရှင်တွေရဲ့ အမှု့ တွေကိုလိုက်ပါ ကူညီနေတဲ့ ဥပဒေအကြံပေး တစ်ဦးက
မုတ်သုန်လေ အားကောင်း နေပြီး နောက်(၂)ရက် အတွက် မိုးကြီး နိုင်သော ဒေသများ
Let Pan | August 2, 2021
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အ‌ခြေအနေ။ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် တို့တွင် မုတ်သုံလေအားအသင့်အတင့်မှ အားကောင်းနေပါသည်။ မနက်ဖြန်မွန်းတည့်ချိန် အထိခန့်မှန်းချက်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အောက်ပိုင်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)တို့တွင် နေရာကျဲကျဲ၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်းနှင့် တောင်ပိုင်း)တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်နှင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာအနှံ့အပြား မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး၊ နေပြည်တော်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကွက်၍
(၁.၈.၂၁) မှ (၇.၈.၂၁)အထိ ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ၏ တစ်ပတ်စာ ဗေဒင်ဟောစာတမ်း
Let Pan | August 1, 2021
ခုနှစ်ရက် သားသမီးများအတွက် ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ၏ တစ်ပတ်စာ ဗေဒင်ဟောစာတမ်း(၁.၈.၂၁) မှ (၇.၈.၂၁)အထိ ခုနှစ်ရက် သားသမီးများအတွက် ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ၏ တစ်ပတ်စာ ဗေဒင်ဟောစာတမ်း(၁.၈.၂၁) မှ (၇.၈.၂၁)အထိ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ … crd
Let Pan | July 31, 2021
စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ ကျင်းပနေတဲ့ One Championship ရဲ့ BATTLEGROUND ပြိုင်ပွဲကြီးမှာ အောင်လအန်ဆန်က ဘရာဇီးလ်ဖိုက်တာ လီအန်ဒရိုအတေးစ်ကို ပထမအချီ မှာတင် အလဲထိုးသက်အနိုင်ယူလိုက်ပါတယ်။ အောင်လက မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း တွဲဆိုင်းမှာ ထိုးသက်တာ ဖြစ်ပြီး ပထမအချီအတွင်း ၃မိနစ်နဲ့ ၄၅ စက္ကန့်မှာ အနိုင် ရလိုက်တာလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲကို မြန်မာစံတော်ချိန် ည
123 … 293 Older